အမှုအရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်နှစ်ကျော်မှာလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောအထွေထွေပြတ်လပ်အရွယ်ရောက်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်း၏အလှန်ခေါင်းစဉ်:အထူးသဖြင့်အခါသင်သွားရရှာသည်တဦးတည်းသောပုံစံအပေါ်အမျိုးသားအရေးယူ။ ဤပြဿနာတစ်ခုအကြောင်းမှာလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပြုပြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူကြယ်ခင်းကျင်း၏မြည်းကိုသံုးေ၊ကြက်နို့စို့ပျော်မွေ့သောအင်္ဂါအကောင်းဆုံး dudes။, ဒါဟာမခံလွယ်ကူပြီးမှရတဲ့အရာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းလျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေနေတယ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်အသင်အဖြစ်လိင်၊ပိုကောင်းပွဲချင်းပြီးအတွက်သင်ပေါ်တွင်သင့်လက်ကိုရရန်အဘယ်ကြောင့်သင်အလိုရှိသော။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့ကအဖွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးဖွင့်၊ဒါကြောင့်စာသားအတိုင်းမည်သူမဆိုလာအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်ရေးအားလုံး-အထီးဖ်ာ္ေျဖေရးကျနော်တို့ရရှိပါသည်။ သဘာဝကျကျ၊သင်သာအယှက်ဖို့လာကဒီမှာသင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ယောက်ျားအပေါ်လူအရေးယူအဖြစ်–ငါတို့သည်သင်တို့အသစ်ဂိမ်းစက်အပြောက်အားလုံးပြီးနောက်!, Anyhow၊သင်တို့အားချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကအကြောင်းပိုမိုသိစာၾကည့္တိုက္ထို့နောက်အောက်တွင်ဖတ်ပါ၊ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးအခုအချိန်မှာစတင်ကစားအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ထက်လျော့နည်းအတွက် ၆၀ စက္ကန့်!
ဒါဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးပါသည်ငါတို့အဘို့သက်သေပြဖို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမှအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်မီသူတို့လက်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုပိုက်ဆံ:အမှာတကြည့်ပင္မလုပ္ငန္းပြပါလိမ့်မယ်သင်ကပင်ရှိလူကြီးအာကာသ၊ဂိမ်းကစားကြရတဲ့အမျိုးအားဖြင့်အုပ္ဆုိင္ကျော်ကြောင်းကတိပေးပြီးမကယ်မလွှတ်။ ကျွန်တော်ဖို့ကြိုးစားနေသက်သာစေနိုင်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့ဂိမ်းကစားများအတွက်ဒီနေရာသွားခြင်းအားဖြင့်ရှေ့ဆက်ပြီးပြောပြသောသူအပေါင်းတို့ကိုတက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဒီမှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့!, မှန်တယ်:သင်ပေးချေဖို့မလိုအပ်မည်ဟုအမေရိကန်တစ်ပြားလျှင်မမွေ့လျော်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်၊နှင့်ပင်ထိုအခါ၊အလံုးပလက်ဖောင်း၏လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများသည်သင်တို့ပျော်မွေ့မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သင်လိုခံစားရလွှဲပြောင်း၏ခဲယဉ်းရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံ။ ကျနော်တို့ရရှိခေါ်ဆောင်သွားအများကြီးတစ်ငရဲ၏လှုံ့ဆျောမှပင်ဂိမ်းခေါင်းစဉ်တွေကိုနားလည်ဖို့အားလုံးကိုလည်းကောင်းစွာလွှတ်ပေးရန်ဘယ်လိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအခမဲ့၊ပူဇော်အဘယ်သူမျှမအကျိုးအတွက်လွှဲပြောင်းငွေနှင့်အဆဲအခံရအမြတ်အစွန်းခံ။ ကောင်းတစ်နမူနာဖြစ်ပါသည်:သွားကြ–သူတို့လုပ်နေရူးနှင့်ကောင်းစွာအားလုံးလာမှပြည်သူ့ဆန္ဒအလျောက်လွှဲပြောင်းသူတို့ရဲ့ခဲယဉ်းရရှိခဲ့သည်-bunce!
ပါင္ၾကားကအမှန်တကယ်နှစ်သက်ခံရဖို့အလုပ်လုပ်အတူအချို့သောတာအကောင်းဆုံး ၃D ဖော်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကအဆိုပါအာကာသကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကိုသာကြည့်ကောင်းသော၊သို့သော်ကစားမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းလွန်း။ ကတည်းကဖွဲ့စည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၊ကျနော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့အပေးအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိသုံးစွဲဖို့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကြည့်လျောက်ပတ်သော:အမြန်မှတဆင့်မကြာသေးမီသမိုင်း၏ညမ်းဂိမ်းဖြစ်သင့်၏ရုပ်ကအလှပဆုံးနေရာများ၏။, သို့တိုင်၊အမှား၏အတိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်သင်ခန်းစာ၏အနာဂတ်အတွက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရှေ့ဆက်မသွားသောလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်စံအစက်အပြောက်၏ရွေးချယ်မှုမှကြွလာသောအခါကြောင်းကိုးကားအထွေထွေဂိမ်းအရည်အသွေးနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ဖန်တီးလိုသောအဆင်းလှသောဒီပဲနှိမ့်ချနိုင်လျှင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပေးပြီးသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။, ရတဲ့အရေပြားမျက်နှာပြင်ဒီအဘယ်သူမျှမလွယ်ကူသောအလုပ်၊ဒါပေမယ့်အမှု၏အချက်ကိုအကြောင်းပါင္ၾကားကလုံးဝအသေသတ်အ homoeotic အာကာသႏွင့္ပိုယာဉ်ရပ်နားရန်အလာတွင်မြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြည်းဆာန်။ သင္ဟာဘာဝံ၊muscly၊twinks၊femboys သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုလုံးဝရှိပါတယ်၊တစ်ဦးအားကြီးသောအခွင့်အလမ်းကောင်းတာပေါ့သူတို့ကိုရှာတွေ့မှရရှိလာသောလက်ျာအပေါ်ဒီမှာလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း! အဲဒီအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်အားလုံးဗွီဒီယိုအသစ်ဂိမ်းကစားထွက်ရှိလာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစက်အပြောက်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံး XXX ဖြန့်ချိ–သိကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာလုပ်နေတော့တချို့!
ကြည့်:အဖြစ်အများကြီးငါထိုင်နိုင်ဒီမှာတနေ့လုံးနှင့်ဒေနာရိအကြောင်းအများလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ၊ကျွန်မထင်တယ်၊ဖြစ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးမှရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကြောင်းအကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပိုမိုသိရန်ကျေးဇူးပြုပြီး၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးစူးစမ်းအပြည့်အဝဒေတာဘေ့စနှင့်ရပ်ရွာကိုယ်အဘို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလွှတ်ပေးရန်အချိန်ဇယားကထပ်ပြောသည် ၁၀ အသစ်ဂိမ်းများအပေါ်တစ်ဦးနှစ်စဉ်အခြေခံနှင့်ဟုတ်ကဲ့–သူတို့အားလုံးဟာလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်နှင့်မည်သည့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှပေးဆောင်အနိုင်ရ။ ကျနော်တို့အသက်ရှင်သောအတွက်ရွှေခေတ်၏အင်တာနက်ပီးအဲဒါဟာမင်းအတွက်အချိန်တစ်စု၏ရှေးရှေးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်အတူတကွဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါအလုံး-အထီးဖ်ာ္ေျဖေရးသင်ရှာ။, ဒီတော့သူကပြောပါတယ်နဲ့အတူ၊သင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့အဘယ်အရာကိုမြင်လိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအပေါ်? သင်တို့ကိုတွေ့မြင်တွင်းဒါကြောင့်အကယ်။!